Ogaanshaha sida loo yiraahdo MAYA waa caddeynta qaan gaadhnimada | KONGOLISOLO
Posted By: Admi1waa: Juun 26, 2016 00: 04 No Comments
Markii nin u kaco himiladiisa, inta badan waxaa lagu qasbaa inuu beddelo jihada, asxaabta, caadooyinka, ururada, dabeecadaha, luqadaha.
Mar walba maskaxda ku hay in aad awood u leedahay in aad ka gudubto dhammaan daciifnimadaada, dhibaatooyinka, iyo kheyraadkaba si aad u noqotid guulayste.
Ninkii tabarta yaraa wuxuu isu ilaaliyaa magac gadaashiisa. Ninka xoogga leh ayaa abuuraya. Waxaa qoray, Michel Hans
Waajibka Xusuusta: Taasi; ayaa sheegaya qodobka 70aad ee dastuurka DRC
Oct01 11: 41